A ga-ewepụta Huawei P30 Lite na Machị 14 | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Huawei, Mobiles
Anyị nwere ụbọchị gọọmentị izute nwanne nwoke nke Huawei ọhụrụ n'elu nke nso. Anyị enweela ike ịmata nke na-esote 14bọchị iri na anọ nke ọnwa a nke March abụwo ụbọchị a họọrọ maka Huawei P30 Lite na-eze n'ihu. Site na imeghe, tupu anyị enwee ike ịchọta Huawei P30 na P30 Pro, Huawei na-ewetara anyị ụdị akụ na ụba nke isi na-esote nke ndepụta ahụ.
Anyị makwaara ihe ọ ga-abụ n’abalị iri abụọ na isii n’ọnwa a mgbe Huawei mechara gosi anyị atụmanya P30. Mana iji mee ka agụụ gụọ gị ma mepụta atụmanya ka ukwuu, ụbọchị iri abụọ tupu Huawei P12 Lite ga-abụ eziokwu. Huawei anọwo na izu ndị na-adịbeghị anya otu n'ime nlebara anya dị ukwuu na ụwa ama ma ọ dị ka ọ ga-aga n'ihu maka izu ole na ole.
Huawei P30 Lite abụghị naanị ama ọ bụla
Mgbe anyị na-ekwu banyere a nkịtị version nke ụdị smartphone ọ bụla anyị ghọtara nke ahụ ọ bụ usoro kachasị dị iche iche nke ụdị na ajụjụ. Nke a bụ otu a. Ma mgbe anyị na-ekwu maka Huawei, na ọnụ ya na P iwu a anaghị emezu oge niile. Dị ka anyị si mara, Huawei P10 na Lite version ya nwetara ndekọ akụkọ ihe mere eme na ọnụ ọgụgụ ahịa. Ihe mere anyi ji nwee uzo ato nke onu ahia n’ahia nke jikọtara Huawei n’ahịa.
Maka nke a, na n'ihi na anyị amatala ọtụtụ atụmatụ Nke ọhụrụ Huawei P30 Lite ga-enwe, nke a abụghị naanị ngosipụta ọ bụla. Anyị amaworị onye nhazi ahụ na ụdị ọhụụ a ga - abụ nke Huawei na-ezube iwere akụkụ buru ibu nke achicha ahụ site na etiti gam akporo. Na Kirin 710 processor, tinyere 4 GB Nchekwa RAM na a nchekwa usoro 64 GB bụ ezigbo ihe kpatara eji etinye Lite a n'uche.
Anyị makwaara na Huawei P30 Lite ga-egosipụta a igwefoto atọ. Anya m na ihe mmetụta 20, 16 na 2 Megapixels. Na ụgwọ ngwa ngwa ma obu a ihuenyo na diagonal nke 6 sentimita asatọ na dobe ekara notch. Enwekwu uru na ihe ndị ka ukwuu na-anọgide na-agbakwunye isi iji mee ka ọ bụrụ nhọrọ na-akpali mmasị n'ezie. N'ime ụbọchị ole na ole, anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na Huawei juru anyị anya n’ihe anyị na-atụghị anya ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A ga-enye Huawei P30 Lite na March 14